Saraakiisha Booliska Soomaaliya oo la barayo dhawrista Xaquuqd... | Universal Somali TV
Saraakiisha Booliska Soomaaliya oo la barayo dhawrista Xaquuqda Aadanaha
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sarreeye Gaas Bashiir Cabdi Maxamed ayaa maanta Saraakiisha sare ee Ciidanka Booliska u furay Siminaar lagu baranayo dhawrista Xaquuqda Aadanaha xilliyada ay ku jiraan waajibaadka shaqo ee loo xilsaaray.
Siminaarkaan oo socon doona muddo labo maalin ah ayaa waxaa casharo ka bixinaya xubin sare oo ka tirsan Ciidanka Booliska Dawladda Ingiriiska oo aqoon gaar ah u leh arrimaha Xaquuqda Aadanaha.
Taliyaha Hoggaanka Canshuuraha ee Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sarreeye Guuto Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa sharaxaad ka Warbixiyey ujeedka siminaarkaan, isaggoo tilmaamay in Ciidanka Booliska ay yihiin xubno ka yimid Bulshadda, islamarkaana ay waajib ku tahay inay ilaaliyaan Xaquuqda Aadanaha.
Si kastaba, Ciidamada booliska, ayaa mararka qaar lagu eedeeyay in si aan wanaagsaneyn ay ula dhaqmaan dadka Shicibka ah, taasoo loo aaneeyo iney salka ku heyso aqoon la’aan heysata, iyadoo hada la isku dayayo in arintaasi xal loo helo.
Kan-xigaQaramada Mdioobey oo tababar u soo xi...
Kan-horeAllaha u naxariisto Wariye Mahad Xasa...
46,614,875 unique visits